Ndifuna ukwazi ukuba iTwitch ihlawula njani? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 252
Namhlanje siphila kwihlabathi elizele ngamathuba kunye neendlela zokwenza imali, akusekho mfuneko yokwenza amadini amakhulu ngokubhekisele kwinto esithandayo, ngoku singakwazi ukufumana imali ngokwenza oko sikuthandayo. Kwaye yile nto kanye uninzi lwabadlali yeqonga leTwitch.
Nangona ingumsebenzi ofuna umgudu kunye nenani elikhulu leeyure zotyalo-mali, ukwenza imali ngemidlalo yevidiyo kuyinyani kwimilanjana emininzi ezenza ubomi kweli qonga. Ngaphezulu kwenethiwekhi yoluntu eqhelekileyo, yindawo apho iidrama zinokuphuhla ngokufanelekileyo kwaye zenze inzuzo ngokwenza eyona nto ziyithandayo, dlala. Ukuba ufuna ukwazi ukuba bayenza njani, siza kukuxelela apha ngezantsi.
Eyokuqala yile yiba yinxalenye yolu luntu, uyenza ngendlela yesiqhelo. Ukujoyina yena.
Nje ukuba ube yinxalenye yoluntu, kufuneka wenze ijelo lakho lokuhambisa, lo ayingomsebenzi onzima konke konke, inkqubo yeqonga ngokwayo iya kukunika imiyalelo ekufuneka uyilandele kule leta kwaye qwalasela ijelo lakho.
Ingxaki yento iqala ngalo mzuzu apho uqala ukuhambisa, Kuya kufuneka wenze ijelo elibonakala ngaphezu kwezinye apho ungabonisi kuphela izakhono zakho njengomdlali onamava, kuya kufuneka ubonise izakhono zakho njengomthengisi.
Ijelo sisixhobo sakho sokukhula Kwaye okunomtsalane ngakumbi ukwenzayo kwabanye abasebenzisi beqonga, kungcono, kuba ngabo, abalandeli bakho, abaya kukukhokelela ekufumaneni imali nodumo. Kuya kufuneka ube ngumlingiswa odumileyo kunye nodumileyo ngaphakathi kubalandeli bevidiyo yomdlalo.
Nje ukuba ukufezekise oku kuqatshelwa kuluntu lwaseTwitch kunye neengcali zesifundo, kuya kufuneka, njengakuyo yonke imisebenzi okanye ubugcisa, zibanga kwaye ube nezakhono ngakumbi nangakumbi ukuhlala phakathi kweyona nto intle, okuthetha ukuba iiyure ezininzi zokuziqhelanisa. Ukuze abalandeli bakho bangaze bayeke ukwanda.
Uya kuthi ngokoqobo uvelise iminikelo oya kuyifumana kubalandeli bejelo lakho, eliya kuthi emva koko likunike indlela yokuphila, ezi Iminikelo iya kwabelwa wena ngeebits, yeyiphi imali esemthethweni eqongeni kwaye abalandeli bakho baya kuyifumana ngemali yokwenyani, eya kuthi ikubhatale ngokucacileyo kwiibits, eziya kuguqulwa zibe yimali yokwenyani kwakhona.
Ngale nto uyakufumana inxenye yefayile ye- umvuzo wentengiso ukuba uthumele kwisitishi sakho, nokuba siphile okanye sisasaza.
Le ndlela ijolise kubaqalayo kweli lizwe, abalandeli bakho baya kukukhuthaza ukunikela ngamabhithi, oya kuthi emva koko utshintshe imali engeyiyo eyenyani.
Oku kwenzelwa eyona nto yaziwayo kunye nentengiso esisiseko, uza kuthengisa izinto I-POP yohlobo lwakho lomntuInenzuzo ngakumbi kunangaphambili ukuba uyayazi indlela yokujongana nayo.
Nangona ingoyena unika ingxelo ngeyona nto ibalulekileyo, yenye yezona zifuna owona msebenzi, kuba kuya kufuneka ube ngomnye Abadlali abadlala phambili kwihlabathi liphela.
1 Inyathelo ngenyathelo: